Talooyin ku saabsan dayactirka maalin kasta ee dabbaasha dabbaasha
waxaa maamula 20-04-15
Si loo joogteeyo laastikada iyo midabka sida bikini-ga xagaaga soo socda, dayactirka maalinlaha ah ayaa aad muhiim u ah. Qodobbada soo socdaa waa qodobbada ay tahay in fiiro gaar ah la siiyo si loo dayactiro maalinlaha. Si aad u dheereysato cimrigaaga boodhkaaga, waad raaci kartaa. 1.Caaminta o ...
10ka ugu sarreeya ee astaanta astaanta biniiska
Bikini wuxuu isticmaalaa qaddarka ugu yar ee dharka iyo daboolida ugu yar si loo kordhiyo quruxda jirka ilaahadda iyo jiritaanka. Bikini wuxuu sare u qaadaa quruxda dusha sare ee caafimaadka haweenka iyo kalsoonidooda. Waa maxay noocyada haweenka ee dabbaasha? Halkan waxaa ah toban magac oo sare oo bistoolad ah oo uu hogaaminayo La Perla qof walba. No.1 ...
Bandhig Faneedka Canton Fair Dabaasha Canton
Ka dib in kabadan 20 sano oo horumar ah, Bandhigga Canton Fair Swimwear Show wuxuu si guul leh u abuuray beel gaar ah, oo isu keenta aqoonyahano iyo xirfadlayaal ka kala yimid adduunka sanad kasta. Ku dhiirrigeli meheradda dhexdooda asxaabta. Bandhigyada dabaasha ayaa si weyn loo bogaadiyay. Waxaa jira bandhigyo dabbaasha oo badan hadda, ...